Họrọ igwe eji agba mmiri nke nwere ọtụtụ ọrụ ga-agbaso usoro ibi ndụ ugbu a
Home / Foset Guide / Họrọ igwe eji agba mmiri nke nwere ọtụtụ ọrụ ga-agbaso usoro ibi ndụ ugbu a
2020 / 10 / 26 nhazi ọkwaFoset Guide 4335 0
Foset na-aga n'okporo ụzọ nke mmepe ọkachamara
N'ime mmụba nke imezi ụlọ, enwere ọtụtụ nka, ọ bụghị naanị ụkpụrụ mma nke ịchọ mma, kamakwa nka nke ịchekwa ego. Otutu ndi mmadu emeela onu ogugu ndi okacha-amara na nke a, di ka ebe inwere ike iche banyere ichekwa ego, na ebe ichoghi iche ego, nke ka nma. Nke a bụ nhọrọ mmadụ mere site na ahụmịhe ndụ. Nke a bụ eziokwu. O kwere omume ịchụso nhazi dị elu ma zuru oke. A ghaghị ijikọ ya na eziokwu iji nweta mkpa ndị bara uru. N'otu oge, ọ mara mma ma nwee ezigbo ọfụma. Pulu mmiri bụ obere ego ịchekwa ego.
Bathroomlọ ịsa ahụ na kichin bụ ebe a na-eji ọkpọkọ mmiri, ma ọrụ metụtara mmiri na-elekwasị anya na njirimara na njirimara dị mma. Họrọ ọkpọkọ mmiri na-azọpụta mmiri kachasị ọhụrụ bụ nhọrọ kachasị ejiji na nhọrọ kachasị dị irè. Ọsọ mmiri apụghị ịchekwa ego. Nke mbu, eji ya eme otutu oge. A ga-ahọrọ ngwaahịa kachasị mma iji hụ na anaghị edozi ya ugboro ugboro iji zere imetụta ojiji na ndụ n'ezie. Tụkwasị na nke ahụ, ọkpọkọ ahụ bụ mmiri mmiri ụlọ ma bụrụ ọkachamara. Ogo bụ naanị otu ụzọ iji nweta ogo iji ọrụ. Ichekwa mmiri bụkwa akụkụ dị mkpa nke ngwaahịa ọhụrụ nwere ọtụtụ ọrụ. Dịka nhọrọ ahụ si dị, njirimara nke ngwaahịa ahụ n'onwe ya doro anya, na ụkpụrụ nchekwa mmiri na-achọkwu ihe, nke a na-achọghị naanị maka nchekwa ego ezinụlọ. Ọ dịkwa mkpa dị mkpa iji chekwaa ume site na gburugburu ebe obibi.
Na-ewere n'okporo ụzọ nke mmepe ọkachamara, ọkpọkọ nke ngwaahịa dị ọcha na-atọ ụtọ karịa na imewe. N'ime ha, imepụta ọtụtụ ọrụ nwere onwe ya nwere njirimara ọkachamara siri ike ma na-egbo mkpa nke ụkpụrụ ibi ndụ nke oge a. Shapedị chic, ọdịdị mara mma, na ọtụtụ ọrụ na-arụkọ ọrụ n'ime otu, nke dị mma maka ndụ na ịchekwa mmiri na ịrụ ọrụ nke ọma.
Nke gara aga :: Ime ụlọ ịsa ahụ ika na ụlọ ịwụ ahụ foset mmezi Osote: Matte Black Dọọ Down Kitchen foset
2020 / 12 / 21 6174
2020 / 11 / 19 5293
2020 / 11 / 19 4824
2020 / 11 / 18 5041
KPỌTỤRỤ ANYỊ TEL: 3476134901 E-mail: sales@wowowfaucet.com